गुलाबी रङको टीसी अनि पुती भित्रको गुलाबी मासु, - Nepali Sex Tube
कुरा आज भन्दा ३ महिना अगाडीको हो, म कामको सिलसिलामा पुर्व गाको थिए । पुर्वमा मेरो एक जना साथी
थियो जो हामी सँगै पहिला कतारमा एउटै कम्पनिमा काम गर्थ्यौ । म फर्केको २ महिना पछि उ पनि फर्केको थियो । बिचमा हाम्रो कुराकानी भई रहन्थ्यो तर २ महिना जति भयो कुरा नभाको, उसको मोबाईल नै अफ थियो । पहिला एकचोटी उसको घर म पुगेकोले मलाई घर चिन्न गाह्रो भएन । म साथीको घर पुगे अनि गेटको घण्टी बजाए, एकछिन पछि साथीको बुढी आई गेट खोल्न , मैले “नमस्ते भाउजु, अनि खै त रमेश ? मोबाईल पनि अफ छ ।” भने । “ए बाबु, नमस्कार, नमस्कार , आज कता बाट नि ? साँची वहाँ त फेरि जानु भयो नि मलेसिया । २ महिना जति भयो जानु भाको , अनि तपाईलाई काठमाडौमा नै भेट्छु भन्नु हुँदै थियो, भेट भएन र ?” उनले भनी । “ए, हो र ? खै त , म सँग भेट नै भएन त । अनि घरमा को को त अहिले ?” ‍मैले सोधे । “घरमा त म मात्र न अहिले, छोरो मामाघर गाको छ, २-३ दिन पछि मात्र आउँछ । अनि बाबु के कति कामले आउनु भयो त पूर्व ?”
उनले सोधिन । “अफिसको कामले आको यता, हप्ता दिन जति यतै काम छ, त्यै भएर यतै पो बास बसौकि भनेर आको, रमेश पनि छैन रहेछ , अप्ठ्यारो पो भो त भाउजु । यता तिर अलि राम्रो लजहरू छन त भाउजु ?” मैले सोँधे । “किन लजमा बस्नु पर्यो नि आफ्नै घर हुँदा हुँदै , पर्दैन बाहिर बस्न , ल भित्रै आउनुस । बरु थाक्नु भाको होला, नुहाईधुवाई गर्नुस अनि म खाना तयार गर्छु, खाईओरी निस्किनु होला । ल खुरूक्क भित्र आउनुस” कराउन थाली । म पनि लुसुक्क परेर घर भित्र छिरे, उनको पछि पछि लागे, अनि एउटा कोठा खोलिदिईन अनि “ल कपडा चेन्ज गर्नुस अनि नुहाईसकेर किचनमा नै आउनुस खाना खान” भनिन । “हुन्छ” भने अनि ढोका बन्द गरे अनि कपडा बदलेर नुहाईसकेर किचन मा गए । भाउजु खाना पस्किदै हुनुहुन्थ्यो म कुर्सीमा बसे अनि खाना ल्याउनु भयो र हामी दुबै जना गफ गर्दै खानु थाल्यौ । खाना खाईसकेर म काम तिर लागे “ल भाउजु, म निस्के है , भरै आउँदा म सब्जी लिएर आउँछु है” भने । “ल हुन्छ हुन्छ, बरू चाँडै आउनु” उनले भनीन । दिन भरी अफिसको काम सकेर ५ बजे तिर निस्के अनि बाटो बाट कुखुराको मासु किने अनि लागे । घर पुग्दा गेट खुल्लै थियो म भित्र छिरे अनि किचन तिर लागे । किचन जाने बाटोको छेउमा नै भाउजुको कोठा थियो , कोठाको ढोका खुल्लै थियो यसो भित्र हेरेको त भाउजु मोबाईलमा च्याट गर्दै रहिछन । भाउजुले मा आएको थाहा पाएको थिईनन उनी हेडफोन लगाएर मस्त सँग कुरा गर्दै थिईन । म ढोका बाहिर बाट नै हेर्दै बसे, यतिकैमा भाउजुले आफ्नो टी-सर्ट खोली र ब्रा देखाईन । म छक्क परे, लाग्यो रमेश सँग भिडियो च्याट गरेको होला ।
ब्रा बाहिर बाट नै दुध माड्न थाली, एकछिन पछि ब्रा पनि खोलि अनि दुधको पोका देखाउन थालि । म हेरेको हेरेकै भए । दुधको पोका माड्दै मोबाईलको क्यामेरा को छेउ लाँदै देखाउन थाली । मेरो लाँडो पनि अब ठन्केर आयो अनि भाउजुलाई चिक्ने रहर पलाएर आयो । ५ मिनेट जति कुरा गरे पछि भाउजुले बाई भन्दै हात हल्लाउन थाली , म हतार हतार फेरि गेट बाहिर निस्के अनि अलि ठुलो आवाज आउने गरी गेट खोले , भाउजुले म आको थाहा पाओस भनेर अनि बिस्तारै घर भित्र छिरे । भाउजु बाहिर आई अनि “आउनु भयो बाबु, हिड्नुस किचन तिरै म चिया पकाउँछु” भनी । म पनि पछि पछि लागे अनि “ल भाउजु मैले मासु ल्याको छु, मिठो पकाउनु है” भन्दै झोला दिए । चिया खाँदै गर्दा मैले सोधे “अनि रमेश सँग कुरा त हुँदै होला नि भाउजुको, के कस्तो छ रे त उताको खबर?” “अँ बाबु, महिनामा एक चोटि मात्र फोन गर्नुहुन्छ , १५ दिन अगाडी कुरा भाको थियो, सबै ठिकै छ रे । काम पनि राम्रै छ रे” उनले भनी । मलाई अचम्म लाग्यो, तेसो भए अगि दुध देखाई देखाई कुरा गरेको रमेश सँग होईन रहेछ , अरू कुनै केटा रहेछ । भाउजु को चालामाला ठिक छैन जस्तो लाग्यो । दुध नै देखाई देखाई कुरा गर्ने भनेको पक्कै भाउजुको चिकाई पार्टनर होला भन्ने मलाई लाग्यो । मैले पनि थाहा नपाए जस्तो गरेर अरु कुरा गर्न थाले ।
“ल भाउजु म यसो हातमुख धोएर आउँछु है त” भन्दै म उठे । मेरो मन मा हलचल मचिएको थियो , उकुसमुकुस भएर आयो । रमेशको बुढीको पुती चिक्न मन लागेर आयो, नांगै पारेर पुती चाट्दै, दुध माड्दै चिक्न भोक पलाएर आयो । म फ्रेश भए अनि किचन मा गए । भाउजु खाना पकाउँदै थिई, टाईट सुरुवाल अनि लामो टी-सर्ट लगाएकी थिई, पछाडी बाट च्याप्प समाएर घोप्टो पारेर ल्वाम कि ल्वाम चिकीहालौ जस्तो भयो , तर आफ्नो मनलाई सम्हाले अनि कुर्सीमा गएर बसे अनि फेरि पुराना गफ गर्न थाले । गफ गर्दा गर्दै ८ बजेछ अनि खाना खानु शुरु गर्यौ । खाना खाईओरी आ-आफ्नो कोठामा सुत्न गयौ । मलाई निद्रै लागेन, भाउजुको नांगो शरीर, पुती कस्तो होला, चिक्दा कस्तो होला भनेर मन भरी कुरा खेलि रह्यो, कति बेला निदाएछु थाहा भएन । बिहान ढोका ढकढक गरेको आवाजले म ब्युँझे, भाउजु ले चिया पकाएर ल्याउनु भाको रहेछ । भरखर नुहाएकोले कपाल पनि चिसो अनि खुल्ला, अनि पातलो कुर्ता लगाएकोले पानीले भिजेर ब्रा समेत देखिने, कती सेक्सी देखेकी थिई , म त हेरेको हेररेकै भएछु । “के हेर्नु भाको त्यसरी” भाउजुले भने पछि म झसंग भए । “केहि होईन” भन्दै चिया लिए अनि पिउन थाले । चिया सकेर नुहाए अनि कपडा बदलेर मा काम मा लागे । “खाना खाएर जानु” भन्दै थिई “मैले आज बाहिर अफिसमानै खाने” भने र लागे । बाटो भरी भाउजुको बारेमा सोँच्दै गए । अफिस पुगे काम गर्न मन लागेन, अनि ११ बजे तिर निस्के । निद्रा नपुगेकोले जीउ भारी भईरहेको थियो यसो सोँचे कोठा मा गएर नै एकछिन आराम गर्छु , अनि फेरि अफिस जाउँला ।
सरासर म कोठा तिर लागे । गेट बाहिर नीलो रङको पल्सर मोटरसाईकल रोकी राखेको थियो , को आएछन घरमा भन्ने सोँचे अनि बिस्तारै गेट खोलेर भित्र छिरे । कता कता मनमा शंका पलायो, कतै भाउजुको सेक्स पार्टनर त होईन? अनि म बिस्तारै भाउजुको कोठा अगाडी पुगे । ढोका बन्द थियो , भित्र बाट केटा मान्छे बोलेको जस्तो आवाज आईरहेको थियो । म अझ नजिक गएर कान थापेर सुन्न थाले । भित्र भाउजु र एक जना केटा बोल्दै थियो । २-३ मिनेट पछि आहहहहहहहहहह अोहहहहहहहहहह जस्तो आवाज आउन थाल्यो । भाउजुलाई चिक्न शुरु गरेको रहेछ । भाउजु निकै आवाज निकाली रहेकी थिई, केटा पनि निकै बल गरेर चिकेको जस्तो कराउँदै थियो । खट खट खट खट खट खाट कराको प्रष्ट सुनिन्थ्यो । भाउजु निकै ईमोसनमा आएर कराउँदै थिई आहहहहहहहहह अझै गरन, अझै जोड ले गरन, प्लीज, अझै भित्र सम्म छिराउन, अझै अझै अझै, फास्ट गरन फास्ट अोहहहहहहहह आहहहहहहहहहह , निकै ईमोशनमा आउने रहीछन भाउजु चिक्दा । मेरो लाँडो ठन्केर आयो, पेण्ट नै छेडुला झै गर्न थाल्यो । करीब ५ मिनेट जति चिके पछि आवाज आउन बन्द भयो, शायद केटाको माल झरेको होला । म हतार हतार फेरि गेट बाहिर निस्के अनि लागे अफिस तिरै । ४ बजे तिर म घर फर्के, त्यो बेलामा त्यो मोटरसाईकल थिएन, मजाले चिकेर गईसकेछ । अब मेरो मन पनि मानेन, आज त जसरी पनि चिक्छु चिक्छु भन्ने मनमनै ठाने अनि गेट भित्र छिरे । भाउजु कोठामा नै थिईन पल्टी रहेकी थिईन, शायद दह्रो चिकाई भेटेर होला अलि थाकित थिईन । “के भो, सञ्चो भएन हो” भन्दै म कोठा भित्र छिरे । “अँ बाबु, अलि टाउको दुख्ला जस्तो भयो , शरीर पनि दुखेर आको छ” उनले भनी । मनमनै सोँचे , चिकाउने बेलामा उफ्री उफ्री कराई कराई चिकाईस , कस्सी कस्सी चिक्न लगाईस अहिले आएर जिउ नदुखेर के दुखोस त ।
“दबाई खानु भयो त?” मैले सोँधे । “सिटामोल खाको, बिस्तारै कम हुन्छ होला” उनले भनी । “साह्रै जीउ दुखेको भए कि मालिस गरिदिउँ त” मैले आँट गरेर भने । “छ्या के भन्नु भाको, हुँदैन” उनले भनी । अब मलाई सहीनसक्नु भाको थियो , आज त जसरी पनि चिक्छु भन्ने ठानेको थिए । “एउटा कुरा सोध्छु है” मैले आँट गरेर भने । “हुन्छ सोध्नु न” उनले भनी । “अगि ११ बजे तिर म अगि म घर आको थिए , को आको थियो कोठामा ?” मैले सोधे । “कहिले अघि ? तपाई कति बेला आउनु भयो र? मैले त थाहा नै पाईन, कोई पनि आको थिएन , किन र?” अतालिदै उनले भनी । कराई कराई चिकाए पछि म आको कहाँ बाट थाहा पाउँथिस र ? मन मनै भने । “किन झुट बोलेको? म आए तिमी कोठामा को सँग थियौ ? निकै कराई कराई चिकाउँदै थियौ त” उनलाई तिमी भन्दै आँट गरेर सबै कुरा भने । उनी बोल्नै सकिनन, अनि घोप्टो परेर बसी । यो कुरा समाजले थाहा पायो भने, रमेशले थाहा पायो भने के हुन्छ ? सोँचेको छौ ?” मैले अलि कडा हुँदै भने । “को हो त्यो ? कहाँ बाट चिनेको, कहिले देखि यो यस्तो चर्तिकला” मैले सोँधे । “मेरो माईती गाउँको हो, अहिले यतै बस्छ काम यतै गर्छ, १ महिना जति भयो भेट भाको । अनि हाम्रो सम्बन्ध भाको चै १०-१५ दिन जति मात्र भयो । प्रायः राती आउँथ्यो अनि यतै बस्थ्यो, तपाई आउनु भाकोले हो दिउँसो आको आज । गल्ती भयो, यो कुरा रमेशलाई नभनिदिनु है , मलाई मार्छ ।” उनी रुँदै भनी । “गल्ती गर्ने बेला चै यो कुरा दिमागमा आएन ? किन नभन्नु नि, म सबै कुरा रमेशलाई भनिदिन्छु ।
तिमी जस्तो बुढी मेरो साथिले राखेको म सहन सक्छु र ?” म पनि ठुलै स्वरमा कराउन थाले । “प्लीज, नभन्नु , तपाईले भन्नु हुन्छ , जे माग्नु हुन्छ म दिन तयार छु , तर यो कुरा नभनिदिनु ।” हात जोडेर रुँदै भन्न थाली । मलाई पनि यही नै चाहिएको थियो । “मैले भनेको जे पनि मान्छौ त?” मैले सोधे । “मान्छु, जे भन्नुहुन्छ म मान्छु” उनले भनीन । “ल भयो अब, नरोउ, जाउ फ्रेश भएर आउ, अनि चिया पिउँदै गफ गरौला” भन्दै म मेरो कोठा तिर लागे । म कपडा बदलिएर किचन तिर लागे, भाउजु किचनमा चिया पकाउँदै थिई । म कुर्सीमा बसे, उनले चिया ल्याएर आईन अनि सँगै बसेर चिया पिउन थाल्यौ । चिया सके पछि मैले भने “जाउँ कोठामा, उतै बसौ” हामी कोठामा गयौ अनि मैले ढोका भित्रबाट चुकुल लाईदिए । मैले च्याप्प समातेर खाटमा सुताए । उनले केहि भनिनन । बिस्तारै किस गर्दै दुध माड्न थाले । उनी पनि मलाई समाएर किस गर्न थालि । किस गर्दै उनले आफ्नो हात मेरो लाडोमा लगिन , हाफपेण्ट बाहिर बाटै मेरो लाँडो समाई । “आमामामा, तपाईको त निकै ठूलो छ जस्तो छ नि लाँडो त, खै हेरम हेरम” उनको यो शब्दले म झसंग भए । निकै खुलेर कुरा गरेको देखेर म अचम्म मा परे, अनि सोँचे, निकै चालु भईसकेको रहेछ । “हेर्ने मन भए आफै खोलिदेउन त” मैले भने । यति भन्न साथ उनले मेरो हाफपेण्ट खोली र मेरो अण्डरवेयर पनि खोलि अनि भनि “कति मोटो र लामो तपाईको त?” यति भन्दै उनले मेरो लाडो आफ्नो मुखमा हाली र चुस्न थाली, लाग्थ्यो कुनै बच्चाले ललिपप चुस्दैछ । लाँडो चुस्न पनि निकै सिपालु रहिछन , मैले भने “लाँडो त निकै मजाले चुस्दो रहेछौ , रमेशको लाँडो निकै चुसिन्थ्यो कि कसो ?” मैले सोँधे । “हो त, वहाँलाई हरेक दिन नचुसाई हुँदैन थियो , शुरुशुरुमा त मलाई आउँदैन थियो अनि मोबाईलमा भिडियो देखाउदै यसरी नै गर भन्नु हुन्थ्यो, पछि त बानि भयो । वहाँलाई चिक्नुमा भन्दा बढी चुसाउनु मा आनन्द आउँथ्यो । हरेक दिन चुसेर झार्नु पर्ने अनि हप्तामा १ -२ चोटि मात्र चिक्नु हुन्थ्यो । आफूलाई चै दिनै जसो चिक्न मन लाग्थ्यो ।
के गर्नु, कति रात त छटपटीमै बिताउँथे ।” उनले सबै कुरा भनी । म चुपचाप लाँडो चुसेको हेरी रहे अनि ५ मिनेट पछि म उठे अनि उनलाई उतानो पारेर सुताए अनि भने “तिम्रो पुती चै चाट्यो कि चाटेन त रमेश ले ?” “छैन अहिले सम्म” उनले भनी । “तिमिलाई दिउँसो चिक्ने तिम्रो साथीले पनि चाटेको छैन त?” मैले सोधे । “अह छैन” उनले भनी । “ल तेसो भए आज म चाटिदिन्छु है त, तिमीलाई कस्तो हुन्छ भन है” भन्दै म उसको पुती निर टाउको पुराए । उसको पुतीभरी पानी आईसकेको थियो, पुरै भिजेको थियो । भाउजुले पुतीको भुत्ला पनि सबै खौरिएको रहिछ, निकै भरीलो पुती थियो । पुक्क फुलेको, टीसी पनि छोपिएको, ब्लेडले चिरेको जस्तो मात्र देखिन्थ्यो , मलाई त कति बेला लाडो छिराएर ग्वाम कि ग्वाम चिकौ भएर आयो । बिस्तारै मेरो दुई औलाले उसको पुतीको मुख खोले, अो हो, गुलाबी रङको टीसी अनि पुती भित्रको गुलाबी मासु, मन फुरुङग भएर आयो । बिस्तारै जिब्रोले टीसी खेलाए । “आहहहहहहहहहहहहहहहहहहहह सीSSSSSSSSSSSSSSSSSS ओहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहह” उनी बिस्तारै कराउन थाली । अझ छिटो छिटो टीसी खेलाउन थाले, उनी कण्डो हल्लाई हल्लाई कराउन थाली । “मजा आयो………. धेरै मजा……………. अझै गर्नु न…………………..” कराउँदै थिई , कहिले काँही म आफ्नो जिब्रो पुती भित्र छिराईदिन्थे अनि वरीपरी घुमाउँथे , उनलाई झन मजा आउँने रहेछ, अझै कराउँथी । पुती बाट पानी धेरै नै बगीरहेको थियो, मेरो मुखभरी पानी नै पानी भयो । करीब करीब ५ मिनेट जति पुती चाटे पछि हामी 69 स्टाईलमा बस्यौ , म मुनी उतानो परेर सुते अनि उसलाई मेरो माथि राखे । उसको पुती मेरो मुखमा र मेरो लाँडो उसको मुखमा ।
म उसको पुती चाट्न थाले उ मेरो लाँडो चुस्न थाली । यसरी धेरै मजा आईरहेको थियो । ५ मिनेट पछि म उठे अनि उनलाई उतानो पारेर सुताए अनि मेरो लाँडो उनको पुतीको मुखमा राखे । “चाँडो गर्नु न, मलाई हतार भईसक्यो तपाईको लाँडो मेरो पुतीमा छिराउन” उनी उत्तेजक हुँदै भनी । मलाई पनि हतार भईसकेको थियो , बिस्तारै लाँडो पुती भित्र छिराउन थाले । “आहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहह” निकै लामो सुस्केरा हालिन , उनको त्यो आवाजले मलाई झन उत्तेजना पैदा गर्यो र जोडले उनको पुतीमा लाँडो छिराए । उनी कराईन “आहहहहहहहहहहहहहहहहहह” म जोड जोडले पुती मा लाँडो हाल्न थाले । म जति जोड जोडले चिक्थे उनी पनि त्यती जोड जोडले नै आफ्नो कण्डो उचाली उचाली मलाई साथ दिन्थी । चिक्न मा निकै खप्पिस भईसकेको थिई । उनलाई चिक्न धेरै नै मजा आईरहेको थियो । पुती बाट धेरै पानि बगेकोले मेरो हरेक धक्का मा “कच्याक कच्याक कच्याप प्याच प्याच प्याच” आवाज आईरहेको थियो । ५ मिनेट जति चिके पछि म पुरै थकित भईसकेको थिए अनि मैले चिक्न रोके , “के भयो , किन रोकिनु भाको , कस्तो मजा आईरहेको थियो , गर्नुन प्लिज, प्लिज” उनी कराउन थालि । “म थाके अब हल्लिने तिम्रो पालो” भन्दै म उतानो परेर सुते ।
उनलाई सबै पोजिसन थाहा रहेछ , म उतानो पर्न साथ उनी मेरो माथी चढिन अनि म तिर फर्केर मेरो लाँडो माथि बसिन अनि आफ्नो हातले मेरो लाँडो उनको पुती मा छिराउन थालिन । जब उनको पुतीमा मेरो लाँडो छिर्यो उनी जोर जोरले हल्लिन थालिन । उनको हल्लाईले खाटबाट पनि खट खट खट खट अावाज आउन थाल्यो । निकै कस्सी कस्सी हल्लिन थालिन ऊनी । जे होस आज उनलाई चिक्न धेरै मजा आईरहेको थियो । ३ मिनेट जति लगातार हल्ले पछि उनी पनि थाकिछन अनि मेरो जीउ माथि पल्टिन “म पनि थाके” उनले भनि । मैले बिस्तारै उनको कण्डो अलि माथि उठाए अनि मुनि बाटै पुतीमा छिराउन थाले ।
उसको पुतिको बासना